FC Muqdisho oo barbaro kucelisay Dekedda +Sawirro
Wednesday January 27, 2016 - 23:01:54 in Xiriirka Kubadda Cagta by Nocsom Editor
Kooxaha kubadda cagta Dekedda iyo FC Muqdisho ayaa shalay galab ku kulmay garoonka Banaadir kulanki 21-aad ee horyaalka. FC Muqdisho oo raadinaysa guushii koowaad ee horyaalka ayaahogaanka cayaarta la wareegtay daqiiqadi 3-aad waxaa goolka u dhali
Kooxaha kubadda cagta Dekedda iyo FC Muqdisho ayaa shalay galab ku kulmay garoonka Banaadir kulanki 21-aad ee horyaalka. FC Muqdisho oo raadinaysa guushii koowaad ee horyaalka ayaahogaanka cayaarta la wareegtay daqiiqadi 3-aad waxaa goolka u dhaliyay kabtanka kooxda Ayuub Yaxye Xaaji. basle waxaa 2ool kaga jawaabay Dekedda.
Waxaa goolka barbaraha waxaa daqiiqadi 17 u dhaliyay xiddiga No -11 C/casiis Hoomeey, waxaana oolka labaad u raaciyay Maxamed Abshir Abuukar( Shooli), 2-1 oo ay hogaanka u hayso kooxda Dekedda ayaa qaybta hore lagu kala nastay.
Marki laysku soolaabtay FC Muqdisho ayaa lasoo baxday cayaar weerar ku dheehan waxayna dadaal dheer kadib heleen goolka Barbaraha waxaan daqiiqadi 79- u saxiixay C/saaq Abuukar Rooble. Waana goolkii ugu qurxoonaanhoryaalkan oo uu cayaaryahan dhaliyo.
Ciyaarta ayaa ugu dambayn kusoo gebagabowday 2-2
Dekedda ayaa kaalinta labaad ee horyaalka fahdida waxayna leedahay 11 dhibcood, halka FC Muqdisho ay kulanka heshay barbarihi labaad waxayna kaalinta 9 la fadhidaa 2 dhibcood.